Sales & Marketing Supervisor Archives - Glory Assumption Space
Sales & Marketing Supervisor – Female - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်
Sales & Marketing Supervisor – Female - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ။ • Supervisor Level ဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်ရိသူဖြစ်ရမည် ။ • ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည် ။ • Sales & Marketing နှင့်သက်ဆိုင်သော Diploma ( or ) Certificate ရရှိထားသူဖြစ်ရမည် ။ • Computer ( Word , Excel , Internet , Email ) အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • Fashion ပိုင်းနှင့်အထည်အလိပ်ပိုင်းတွင် အတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည် ။ • အထည်ချုပ်စက်ရုံများသို့ ၀င်၊ ထွက် သွားလာဖူးသူဦးစားပေးမည် ။ • Smart ကျကျနေထိုင်တတ်သူဖြစ်ရမည် ။ • ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • အသက် ( ၂၅ ) နှစ်မှ ( ၃၀ ) နှစ်အတွင်းရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန်မနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • တနင်္ဂနွေ နှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည် ။ • မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ရှိ အထည်အလိပ်များ Trading လုပ်သည့် Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ရှိ အထည်အလိပ်များ Trading လုပ်သည့် Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09263121101, 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09262223784 ,09263121101, 09977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Supervisor – Male - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ်/ မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်
Sales & Marketing Supervisor – Male - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ်/ မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ် ။ • Sales & Marketing Supervisor ရာထူးဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၂ ) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • သက်ဆိုင်ရာ Diploma ( or ) Certificate ရရှိထားသူဖြစ်ရမည် ။ • ဆိုင်ကယ်စီးနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • တနင်္ဂနွေ နှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည် ။ • မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ Medical Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ Medical Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number – 09 - 977397705 , 09 263121101 , 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 ,09 263121101 , 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Supervisor (Freight Forwarding) – Male/Female (10) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)
1.	Sales & Marketing Supervisor (Freight Forwarding) – Male/Female (10) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / လသာမြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	နယ်ခရီးသွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ယခင် Marketing & Distribution နယ်ပယ်ဖြစ်ရမည်။ •	Sales Plan / Marketing Plan / Sales Target များကို ဆွဲပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ကားလိုင်စင်ရှိရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကို ကျွမ်းကျင်စွာ သွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် ( 9:30 AM – 5:00 PM ) •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လသာမြို့နယ်ရှိ Cargo & Freight Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales & Marketing Supervisor – Female - (5) Posts/လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁) Sales & Marketing Supervisor – Female - (5) Posts/လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် /မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်။ • Supervisor Level ဖြင့် (၃) နှစ်အထက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ရ မည်။ • တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိရမည်။ • Sales & Marketing နှင့် သက်ဆိုင်သောသင်တန်းများ တက်ရောက်ထားသူ ဖြစ်ရမည်။ • အသက် (၂၅-၃၀) အတွင်း ဖြစ်ရမည်။ • Computer (Word/Excel) ကျွမ်းကျင်ရမည်။ • Personal Skill / Customer Relationship ကောင်းမွန်ရမည်။ • စုစုပေါင်းလုပ်သက် (၇) နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ • လိုအပ်ပါကအထက်မြန်မာပြည်သို့ ခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • Trading/Distribution နယ်ပယ်မှ ဖြစ်ရမည်။ • မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင်ရှိသော Trading Company ကြီးတွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်တွင်ရှိသော Trading Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
၁) Sales & Marketing Supervisor - Male/Female - (5 ) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် /တာမွေမြို့နယ်။
၁) Sales & Marketing Supervisor - Male/Female - (5 ) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် /တာမွေမြို့နယ်။ • Supervisor Level ဖြင့် (3) နှစ်အထက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ် ရမည်။ • Any graduate/ Sales & Marketing နှင့် သက်ဆိုင်သော သင်တန်းများ တက်ရောက်ထားသူဖြစ်ရမည်။ • အသက် ( 25 ) နှစ်အထက် (30 ) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ • Computer ( World / Excel ) ကျွမ်းကျင်ရမည်။ • စုစုပေါင်းလုပ်သက်(7) နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ • အထက်မြန်မာပြည်ကိုခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • Trading /Distribution (စားသောက်ကုန် )နယ်ပယ်မှဖြစ်ရမည်။ • တာမွေမြို့နယ်တွင်ရှိသော Trading Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော တာမွေမြို့နယ်တွင် ရှိသော Trading Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါ ၀န်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Supervisor – Male - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) +++
1.	Sales & Marketing Supervisor – Male - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) +++ / လသာမြို့နယ် ။ •	ယခင် Marketing & Distribution နယ်ပယ်တွင်လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်နှင့် အထက်ရှိရမည်။ •	Sales Plan / Marketing Plan / Sales Target များကိုဆွဲပေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ကားလိုင်စင်ရှိရမည်။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကို ကျွမ်းကျင်စွာ သွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	နယ်ခရီးသွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် ( 9:30 AM – 5:00 PM ) •	ယူနီဖောင်းရှိသည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လသာမြို့နယ်ရှိ Trading Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ ) [caption id="attachment_5277" align="alignnone" width="612"] Wooden staircase to reach goal and win trophy with increase graph and arrow, successful[/caption]
၁) Routing Supervisor - Male – (5)Posts /လစာ -၂၅၀,၀၀၀ကျပ် / တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GASနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောDistribution Co.Ltd တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ ၁) Routing Supervisor - Male – (5)Posts /လစာ -၂၅၀,၀၀၀ကျပ် / တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွင်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ( ၂ ) နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - Way Planဆွဲနိူင်ရမည်။ - ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။ - ကားမောင်းနိုင်ရမည်။ - အသင်းအဖွဲ့ဖြင့်ဆောင်ရွက်နုိင်သုဖြစ်ရမည်။ - တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါကဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales & Marketing Supervisor – Male/Femal (5)Posts /လစာ-၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Interior Decoration Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ ၁) Sales & Marketing Supervisor – Male/Femal (5)Posts /လစာ-၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် /မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၃၀ နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။ - Construction Project များကိုလိုက်နိုင်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Supervisor – Male(or)Female - (5)Posts /လစာ- ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ်/
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1. Sales & Marketing Supervisor – Male(or)Female - (5)Posts /လစာ- ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ်/ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက်၃၀-၃၅ နှစ်ကြားရှိရမည်။ - အရောင်းဝန်ထမ်းများအားကောင်းမွန်စွာကြီးကြပ်နိုင်ရမည်။ - စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၃)နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Supervisor - Male/Female (5)Posts/ လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောလှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ Cool Storage စက်ရုံတွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါ ၀န်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
Sales & Marketing Supervisor - Male/Female (5)Posts/ လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်/လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - Sales & Marketing ပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်အနည်းဆုံးရှိရမည်။ - လိုအပ်လျှင်နယ်သွားနိုင်ရမည်။ - Customer အသစ်များရှာဖွေပေးနိုင်ရပြီးနေ့စဉ် Way လမ်းကြောင်းများဆွဲပေးနိုင်ရမည်။ - လိုအပ်လျှင်လိုသလိုအချိန်ပိုဆင်းပေးနိုင်ရမည်။အချိန်ပိုဆင်းလျှင် OT ကြေးခံစားခွင့်ရှိသည်။ - တပတ်တစ်ရက် နှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Supervisor – Male (5)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် +++
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales & Marketing Supervisor – Male (5)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် +++/တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - စားသောက်ကုန်ပိုင်းတွင် အရောင်း (၂)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - အပြင်သွားလာနိုင်ရမည်။ - Way လမ်းကြောင်းများဆွဲနိုင်ရမည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Supervisor – Male /Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Manufacturing Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။
1. Sales & Marketing Supervisor – Male /Female (5)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် ++++ / လှိုင်သာယာမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၅)နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂ )နှစ်ရှိရမည်။ - စားသောက်ကုန်ပိုင်းတွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales & Marketing Supervisor – Female (5) Posts /လစာ- ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် /လမ်းမတော်မြို့နယ်။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Laboratory Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales & Marketing Supervisor – Female (5) Posts /လစာ- ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် /လမ်းမတော်မြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - ကွန်ပျူတာသုံးနိုင်ရမည်။English စာရရမည်။ - ချိုသာ၍ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ - Marketing အတွေ့အကြုံရှိရမည်။Medical Field Marketing အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - အပြင်သွားနိုင်ရမည်။ခရီးထွက်နိုင်ရမည်။ - အသက် ၂၅ - ၃၅ နှစ်ကြားဖြစ်ရမည်။ - စာချုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။ - ဓါတ်ခွဲခန်းလုပ်ငန်းများ၌ Marketing လုပ်နိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။